FLV fim ga-arụ ọrụ na iMovie na ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ha ụzọ naanị iMovie nwere ike, ị ga-mkpa iji tọghata videos na iMovie dakọtara usoro. Mgbe ụfọdụ nnukwu nsogbu nwere ike ịbịa na otú iji tọghata faịlụ ka iMovie dakọtara usoro. Ọtụtụ n'ime ndị ngwọta dị taa ma na-adịghị arụ ọrụ ma ọ adịghị emepụta nri àgwà nke video.
Dabara nke ọma n'ihi na ị isiokwu a na-aga a na-emeso otú mbubata FLV ka iMovie n'ụzọ na-bụ oru oma ma mfe iji. Nke a bụkwa a zuru ezu na ndu ka importing gị FLV video ka iMovie. Anyị ga-amalite site ná mmalite, na-aga nzọụkwụ site nzọụkwụ ruo ọgwụgwụ. Ka amalite.
Iji ọma mbubata FLV ka iMovie, anyị na-aga dị mkpa a ngwá ọrụ na-pụrụ inyere anyị aka ime nke a n'ụzọ dị mfe. Wondershare Video Converter Ultimate Bụ ngwá ọrụ maka ọrụ. Ụfọdụ n'ime ya atụmatụ na-agụnye;
Nke a ngwa-enye gị ohere iji tọghata ma na-ekiri vidiyo na n'elu 150 dị iche iche formats
Ọ bụ ihe karịrị nanị a Ntụgharị dị ka ị nwere ike idezi ma welie gị videos nakwa
I nwekwara ike Ọkụ DVD maka mgbe e mesịrị ojiji
Na a ngwa video akakabarede bụ 30x ngwa ngwa
Ọ bụ dakọtara na ọtụtụ ndị ọzọ na video onwunwe na ngwaọrụ
I nwekwara ike iji ya na-enuba media ka TV nnọọ mfe.
A bụ otú iji Wondershare Video Converter Ultimate mbubata FLV ka iMovie. Tupu anyị mee nke a, hụ na ị na ibudata ma wụnye ọhụrụ version nke Wondershare Video Converter Ultimate.
Nzọụkwụ One: Bubata FLV
Iji mbubata gị FLV faịlụ ka Wondershare Video Converter Ultimate, ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe faịlụ ma ọ bụ pịa "Tinye File"
Nzọụkwụ Abụọ: Họrọ mmepụta format na nri n'igbe akara "mmepụta Format" Dị nnọọ họrọ ihe kwesịrị ekwesị usoro (na nke a, ọ bụ iMovie format) na dobe ala menu
Nzọụkwụ atọ: Ozugbo ị bụ obi ụtọ na gị nhọrọ click on "tọghata" iji tọghata gị FLV faịlụ. Ma tupu-eme nke a, ọ dị mkpa iji họrọ mmepụta nchekwa ebe na ala panel akara "mmepụta nchekwa." The ndabere bụ C: \_ ọrụ \_ Public \_ Documents \_ Documents \_ Wondershare Video Converter Ultimate \_ mmepụta.
Pịa "Open nchekwa ghota ọzọ ụzọ.
Ugbu a, na FLV video e converted iMovie dakọtara format, anyị pụrụ nanị mbubata ya ka iMovie na dezie ma ọ bụ ịkọrọ ya. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ mbubata gị video ka iMovie.
Nzọụkwụ otu: Mwepụta iMovie na-aga "File menu" na họrọ "New Project." Ị ga-achọ ka aha ọhụrụ oru ngo ma họrọ otu akụkụ ruru.
Nzọụkwụ Abụọ: Gaa "File" wee họrọ Import
Nzọụkwụ atọ: Họrọ Movies na mgbe ahụ họrọ video anyị dị converted
The video ga-dị ka iMovie na ị nwere ike ahụ gaba edezi.
Gịnị mere FLV-apụghị dị n'ime iMovie
N'agbanyeghị eziokwu na FLV bụ otu n'ime ihe ndị kasị formats maka video faịlụ nkesa, FLV videos nwere ike na-arụ ọrụ na iMovie. Kasị video nkekọrịta saịtị eji FLV format ma nke a format-apụghị dezie na iMovie. Nke a emewo ka a otutu nke obi nkoropụ n'etiti iMovie ndị ọrụ chọrọ dezie ha FLV videos ma cant.
Naanị ihe mere gị FLV videos ga-arụ ọrụ na iMovie bụ nanị n'ihi iMovie anaghị akwado FLV faịlụ. E nwere ọtụtụ ihe ngwọta Otú ọ dị na ndị kasị dị irè otu ịbụ onye anyị kọwara n'elu. Dezie gị FLV vidiyo na iMovie, ị na-adịghị ihe ọ bụla ọzọ ọzọ ma iji tọghata FLV ka a format na bụ dakọtara na iMovie.
Dabara nke ọma n'ihi na gị, ị pụrụ nnọọ iji usoro n'elu iji tọghata FLV na mbubata ka iMovie na-anọgide na-enwe gị video edezi.
> Resource> iMovie> Olee mbubata FLV ka iMovie